China ZZ Eco Products Sugarcane Bagasse Kọfị iko kọfị-8, 12 na 16 oz - 1000 na-emepụta igbe na ndị na-eweta ihe | ZHONGSHENG
ZZ Eco Products Sugarcane Bagasse kọfị kọfị okpukpu-8, 12 na 16 oz - igbe gụọ 1000
Ihe adighi: PL-01
Size: 93 * 20mm
Ogo katoonu: 46 * 27 * 37.5cm
Mbukota: 20 * 50pcs
E mere ya maka anyịce-ounce 8-ounce, 12-ounce na nke 16-ounce na iko kọfị nwere ike ịfe kọfị, okpukpu okpomoku ndị a na -eme ka iwu kọfị bụrụ nke dabara adaba. Ejiri akpa akpa okpukpu 100%, ihe mkpuchi ndị a dabara nke ọma na iko anyị - ọkachasị iko ndị ibe anyị ịkebe - na-ahụ na iwu kọfị ma ọ bụ tii ị ka na-adị ọhụrụ mgbe niile. Na-ewu ewu na nkecha, ihe mkpuchi ndị a dabara na iko ndị kwekọrọ na ha, na-echebe ndị ahịa pụọ ​​na mgbawa ma na-eme ka ihe dị ọkụ. 1000 ga-enweta 1000 nke ihe mkpuchi a kwa otu. Enwere ike ịzụta iko kọfị na iko kọfị iche iche.
ZZ Eco Products Sugarcane Bagasse Kọfị iko kọfị-8, 12 na 16 oz. - 1000 gụọ igbe Ekerepụtara nke ọma maka ounce-ounce anyị-ounce, 12-ounce na wice 16, na iko tii ndị nwere ike ịfe kọfị, okpukpu okpomoku ndị a na -eme ka iwu nke kọfị dị mma ma nwee nchebe. Ejiri akpa akpa okpukpu 100%, ihe mkpuchi ndị a dabara nke ọma na iko anyị - ọkachasị iko ndị ibe anyị ịkebe - na-ahụ na iwu kọfị ma ọ bụ tii ị ka na-adị ọhụrụ mgbe niile. Na-ewu ewu na nkecha, ihe mkpuchi ndị a dabara na iko ndị kwekọrọ na ha, na-echebe ndị ahịa pụọ ​​na mgbawa ma na-eme ka ihe dị ọkụ. 1000 ga-enweta 1000 nke ihe mkpuchi a kwa otu. Enwere ike ịzụta kọfị kọfị na nkuzi iche iche.
Iri iko 80mm / 90mm
Agba: Eke & Agba
Efrata: Bagasse & Bamboo
Dimension: dayameta 87mm * Ogo 18.5mm (80mm)
Dayameta 94mm * Ogo 20.5mm (90mm)
Ibu ibu: 4-5g (± 0.5g)
Ibe dabara mma: iko 80mm / 90mm dayameta, na-abụkarị 6-16oz
50pcs / mkpọ
20packs / ctn
1,000pcs / ctn
Ogo Carton: 45 * 30 * 36.5cm / 40 * 28 * 49cm
Ihe dị ka 1,360ctns / 40HQ (80mm)
1,200ctns / 40HQ (90mm)
Oge ndu: 1 * 40 ”HQ gburugburu 20-25days
Ike ọkọnọ: nkeji 2,400,000 kwa ọnwa
1. Ihe: 100% fiber pulp, heathy, 100% biodegradable na gburugburu ebe obibi maka akụrụngwa
Na-adịghị egbu egbu: ọnweghị ihe ojoo ma ọ bụ ihe ordor a na-ahapụ ka ọ bụrụ oke okpomọkụ ma ọ bụ na ọnọdụ acid / alkali: 100% nchekwa kọntaktị nri
Microwaveable: A ga-eji nchekwa microwave, oven na friji
Biodegradable na compostable:100% biodegrade n'ime ọnwa abụọ: ihe ga-emebi n'ime CO2 NA mmiri: nke bPI / OK compost kwadoro
Recyclable; imeghari, gagharịa iji tinye mpempe akwụkwọ, belata mkpa maka ihe eji eme mmanụ
Mmiri na akaebe na-ekpo ọkụ:248 ° F / 120 ° C mmanụ na-ekpo ọkụ na mmiri mmiri 212 ° F / 100 ° Chot
A + ogo na anwụ ngwa ngwa: ezigbo ike na ịdị elu; stackable: mgbapu mmiri;
Iche: ihe kar ị narị narị abụọ bụ maka nhọrọ gị
Nke gara aga: ZZ Eco Products Sugarcane Bagasse kọfị kọfị okpukpu-8, 12 na 16 oz - igbe gụọ 1000
Osote: Ngwa ahia ZZ Eco 6 Ench Roc Sugarcane Bagasse efere, enwere ike iwepu ya na enyi enyi, ngwugwu 1000
ZZ Eco Ngwaahịa Biodegradable 2 OZ Sugarcane Ba ...
ZZ Eco Ngwaahịa Sugarcane Bagasse kọfị Li ...
ZZ Eco Ngwaahịa Biodegradable 7 OZ Sugarcane Ba ...
ZZ Eco Ngwaahịa Biodegradable 4 OZ Sugarcane Ba ...
ZZ Eco Ngwaahịa Biodegradable Sugarcane Bagasse ...